Basa: Mhando, hunhu, mashandisiro uye kuyedza - Ikkaro
kudzidziswa >> Zvinhu >> Papel
Pepa chinhu chine makore angangoita 2000 enhoroondo. Vanhu vazhinji vanozvibatanidza nemabhuku, machira uye zvinyorwa. Asi kune zvimwe zvakawanda kumashure kwazvo.
Icho chinyorwa chandinoda, ini ndinoda iko kugadzirwa kwepepa rakanaka, kuibata, kunhuwidza uye kushanda naro. Icho chiri pasi.
Kune mhando dzakawanda dzebepa rine hunhu hwakasiyana uye kuti tinogona kurishandisa pazvinangwa zvakasiyana, kubva mukugadzira mufananidzo we origami kana origami kuishandisa sechinhu chakaumbwa nezvinhu zvakasiyana.
Muchikamu chino tave kuzosiya ruzivo rwakawanda pamusoro pepepa, nhoroondo yaro, maumbirwo ayo, maumbirwo ayo, mhando dzakasiyana dziripo, mashandisiro awakange usati wambofungidzira, asi pamusoro peyese miedzo yaunoita nayo bepa. Kubudirira uye kukanganisa mukushandisa kwekunyepedzera kwepepa
Ndinovimba unonakirwa nazvo seni.
El Washi inonzi zvakare bepa reJapan, bepa reJapan kana Wagami, ipepa rekugadzira kubva kuJapan. Ndiyo bepa remhando yepamusoro riripo uye muJapan rinoshandiswa mune zvakawanda zvinhu. Inowanikwa mune ese marudzi ezvigadzirwa, amburera, zvishongo, lithographs, madhirezi emuchato, masiki anopokana necoronavirus, nezvimwe. Icho chiri kwese kwese pepa muJapan.
Nhasi unogona kuwana wakagadzirwa nemawashi uye muchina wakagadzirwa washi. Asi Maitiro ekugadzira artisanal washi yanga iri Intangible Cultural Heritage yeUnesco kubvira 2014 mukucherechedza papercraft munzvimbo nhatu: Hamada (Shimane Prefecture), Mino (Gifu Prefecture), uye Ogawa / Higashi-chichibu (Saitama Prefecture). Uku kupesana kune echinyakare maitiro ekugadzira.
Ipepa rakanakisa, risingadziviriri uye rinopenya risingatsvodi nekufamba kwenguva. Iine huremu hwe5 kusvika 80 g / m2
Iwe uchafarira chinyorwa chedu pa rakashandiswazve bepa asi pamusoro pezvose zve maitiro ekugadzira mapepa ekugadzira.
Iyi inzira yakapusa uye ingangoita chero bepa rinogona kudzokororwa.
Mapepa akakurudzirwa ndeaya:
Iwo mafomu anoramba aripo (Akanyanya kukodzera sezvo iwo achiomarara nekuti ane tambo refu).
Pepa reBrown rinoshandiswa kuputira (kunze kwekunge riine huwandu hwakawanda hwesimbi),
Mapepa mabhegi nemahamvuropu.
Pepa rakatodhindwa (kunyangwe zvisingakurudzirwe kushandisa chero chakawandisa ).
Newsprint inogona kushandiswa sevhoriyamu, chero ikasanganiswa nezvimwe zvinhu.
Dzivisa mapepa akajeka uye anopenya, sezvo angangove akafukidzwa nekaolin, izvo zvinogona kukonzera zvigamba zvine guruva pabepa.